बन्दाबन्दी खुलेपछि सीमामा बढ्यो तस्करी « Loktantrapost
बन्दाबन्दी खुलेपछि सीमामा बढ्यो तस्करी
झापा, २२ साउन (रासस) : बन्दाबन्दी खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा तस्करी धन्धा सलबलाएकोे छ । साउन महिनामा मात्र झापाको प्रहरीले रु. २० लाखभन्दा बढी मूल्यका तस्करीका सामान दशगजाबाट बरामद गरी भन्सारमा बुझाएको देखिन्छ ।
(यो फोटो झापा जिल्ला बाहिरको हो, सन्दर्भ मिल्दोजुल्दो भएर छापिएको हो ।)
साउन १२ गते राति डेढ बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको प्रहरी गस्ती टोली मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीको उत्तरी सीमाक्षेत्र प्रसादगौडामा पुग्दा नेपालबाट ठूलो मात्रामा सुपारी भारततर्फ तस्करी गर्ने प्रयास हुँदैथियो । प्रहरी पुग्नासाथ तस्करहरुको भागाभाग भयो । दशगजाबाट प्रहरीले रु. चार लाख ४१ हजार बराबरको सुपारी बरामद गर्यो ।
तस्करहरुले रातिको मौका छोपेर धन्धा चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । साउन १७ गते राति साढे १२ बजे प्रहरी चौकी टाघनडुब्बाबाट खटिएको गस्तीसँग दशगजा क्षेत्रमा तस्करहरुको जम्काभेट भयो । तस्करहरुले रु. तीन लाख मूल्य बराबरको लत्ताकपडा छाडेर भागेपछि ती सामान बरामद गरी प्रहरीले भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
मङगलवार राति प्रहरीको गस्तीले काँकडभिट्टा मूलभन्सार नाकाबाट एक किलोमिटर दक्षिण मेचीनगर–७ गैरीगाउँमा रु. चार लाख ७५ हजार मूल्य बराबरका १९ थान महँगा मोवाइल सेट बरामद गरेको थियो । भारतबाट लुकाईछिपाई नेपाल भित्राउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले दशगजामा ती सामान बरामद गरेको हो ।
तीन दिन अघि प्रहरीले ज्यामिरगढी र कुमरखोदबाट दशगजा क्षेत्रबाटै रु. आठ लाख ५२ हजार ५०० मूल्य बराबरका लत्ताकपडा बरामद गरेको थियो ।